Hello Nepal News » बार्सिलोना–क्यामरूनका लिजेन्ड इटोद्वारा सन्यास घोषणा
बार्सिलोना–क्यामरूनका लिजेन्ड इटोद्वारा सन्यास घोषणा
एजेन्सी, भदौ २१
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना तथा क्यामरुनका लिजेन्ड खेलाडी सामुएल इटोले फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका छन् । गत राति सामाजिक सन्जाल इन्स्टाग्रामार्फत् उनले ३८ वर्षको उमेरमा फुटबलबाट सन्यास घोषणा गरेका हुन् । सिजन २०१८–१९ कतार क्लब कतार एससीबाट खेलेका उनले अब सबैखाले फुटबल बिसाउने निर्णय हुन् ।
उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्– ‘समाप्ती । अब म नयाँ चुनौतीका लागि तयार छु । सबैलाई धन्यवाद ।’
इटोले आफ्नो व्यावसायिक करिअरमा स्पेन, रसिया र इटालीमा खेलेका थिए । तर, उनी स्पेनमा बार्सिलोनाबाट खेल्दा सफल खेलाडीका रूपमा चिनिएका थिए । बार्सिलोनामा उनले सन् २००४ देखि २००९ सम्म खेलेका थिए । उनले बार्सिलोनाबाट तीन ला लिगा दुई च्याम्पियन्स लिग जितेका थिए ।
इटोले इटालियन क्लब इन्टर मिलानबाट पनि सन् २०१० मा च्याम्पियन्स लिग जितेका थिए । उनले क्यामरुनको राष्ट्रिय टोलीबाट सन् २००० मा गोल्ड मेडल जितेका थिए ।
इटो क्यामरुनका सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् । उनले देशका लालगि ५६ गोल गरेका छन् । क्यामरुनले सन् २००० र २००२ मा लगातार अफ्रिका कप अफ् नेसन्सको उपाधि जित्दा उनी टोलीका प्रमुख खेलाडी थिए । उनी १८ गोलसहित नेसन्सको कपको सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् ।
इटाले बार्सिलोनाका लागि १४४ खेलबाट १०८ गोल गरेका छन् भने इन्टर मिलानमा ६७ खेलबाट ३३ गोल गरेका छन् । उनले पछिल्लोपटक कतारी क्लब कतार एससीका लागि १७ खेलबाट ६ गोल गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २१ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:३७
उपाधि होडमा निर्णायक भिडन्त : आज बार्सिलोना र एथ्लेटिको आमनेसामने हुँदै
बार्सिलोना अनुबन्धको नजिक पुगेर यसकारण पछि हटेका थिए मार्टिनेज : गरे आफैं खुलासा
एथ्लेटिको विरुद्धको ‘महाभिडन्त’अघि कोम्यानका चार डाइलग : कति होलान् पूरा ?
‘फ्यानहरूले गालीगलौज गरेपछि’ बोले हाजार्ड : माफी माग्दै गरे यस्तो बाचा
‘विवादित’ यी रेफ्री जसले बार्सिलोना–एथ्लेटिको मड्रिडको खेल खेलाउँदैछन्
गोल्डेन बुट दौड निर्णायक मोडतर्फ : यस्तो छ ताजा स्थिति
रियल मड्रिडको धुलाइ गर्दै चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा
चेल्सी भर्सेस रियल मड्रिड : पहिलो हाफमा चेल्सीलाई अग्रता
चोटले ‘गोल्डेन ब्वाई’ फातीको भविष्य बर्बाद : एउटै चोटका लागि तेस्रोपटक अप्रेसन हुँदै
निर्णायक खेलमा चेल्सीविरुद्ध उत्रिनुअघि जिदान र क्रुसले के–के भने ?
कोउटिन्हो एभर्टन अनुबन्ध नजिक : ट्रान्सफर फी सुन्दा पत्याउनै मुस्किल !
पूर्व निर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय : अरू कुन–कुन क्षेत्र बन्द हुन्छन् ?
बालोन डिओर–२०२१ को नयाँ ‘पावर र्‍याङकिङ’ सार्वजनिक : कसको स्थान कहाँ छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा वृद्ध भत्ता बढाउने घोषणा : कति बढ्दै छ ?
गोलको खडेरी तोड्दै ३७ वर्षपछि घरेलु मैदानमा नेपालले जित्यो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि
नेपालमै पहिलोपटक लन्च भयो नेपाली विद्यार्थीले बनाएको ‘गरुडा रकेट’
गम्भीर चोट बोकेका विमलको कतारमा सफल अप्रेसन
पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडा स्नातकोत्तर पढ्न हार्वर्ड विश्वविद्यालय जान छनौट
‘एमबाप्पे मेस्सीको छेउमा पनि छैनन्, न मेस्सीको स्तरमै पुग्न सक्छन्’
कुलमान घिसिङलाई रोक्न ‘नियम र प्रक्रिया’को तर्क : ओलीका मान्छे चैं सोझै नियुक्त !